Posted by blackroze at Monday, November 14, 2011
မောင်ဘုန်း on 15 November 2011 at 08:24 said...
အလိုလို ...အ တော် စိတ်ကြီးတာပဲနော် ...
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီလို ချစ်သူနှစ်ယောက် စကားများနေတာကို မကြားချင်ဘူး။ မမြင်ချင်ဘူး။ အားမရလို့။ ဖြစ်နိုင်ရင် မျက်စိရှေ့မှာ နဘန်းသတ်ကြတာ ကြည့်ချင်တယ်။ တာလီဘန်နည်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်နည်းနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။း))
မဒမ်ကိုး on 15 November 2011 at 09:08 said...
ဖျားး ဖျားးးးး ..ဖတ်ရသည်မှာ ရင်တုန်ပန်းတုန်ရှိလှသည် ။။ချစ်သမီး ဂျယ်လီ..
မျက်လုံးထဲတွင် တာလီဘန်တို့ ဒုံးကျည်ကြီးထမ်းပြီး ခေါင်းပေါင်းကြီးနှင့်ကိုပြေးမြင်သည်။
အသက်ရှုရပ်ကာ ဆက်ဖတ်သည်..ပြီးသွားမှ အသက်ရှုဖို့သတိရသည်။း)
အကောင်းဆုံး အကြံပေးလိုသည်မှာ ဇန်န၀ါရီတွင် ၃ သိန်းတန်ဖုံးများထွက်မည်ဖြစ်ရာ ၀ယ်ပေးလိုက်ပါလေ .(အရာရှိများ ဟမ်းဖုန်းရပါသည် .ဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မသိချေ. မေးကြည့်ပါလေး) ၃ သိန်းရင်းပေးပြီး ဖုန်းဘေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆောင်ခိုင်းပါလေ .မတော် တခြားဖုန်းတွေလျှောက်ခေါ်နေမှဖြင့် မထိတ်သာမလန့်သာ ဘီလ်တက်နိုင်သည်း)
ကြာလျှင် ဂျယ်လီပစ်ပစ်မှ ဂျယ်လီပိန်ပိန်ဖြစ်တော့မည် ။
လိုအပ်လျှုင် လိုက်သာသွားပါလေ ။ ယူသင့်လျှင် ယူချလိုက်ပါချေ။
နောင်ခါလာနောင်ဈေးဖြစ်သည်။ စစ်ကူရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည် ။ လက်ဖွဲ့လဲကြီးကြီးပို့ချင်ပြီ ။။။။
(အထုပ်ထမ်းဖို့ အားမွေးထားသည် ။ ကလေးထိန်းပေးရန်အသင့်ရှိနေသည် ။း)
ကိုရင် on 15 November 2011 at 09:21 said...
အသာ လုပ်ပါ..အသာ လုပ်ကြပါ..ဟိုတရုတ်ကလည်း ထိပ်က ကွက်ပြီးရိတ်ပေးလိုက်ရမှာ ဆံပင်ကို..
မနက်တုန်းက မန့်တာ မရဘူး... အခုမှ အဆင်ပြေတယ်..၀က်ဝက်ရေ..
ညီရဲ on 15 November 2011 at 13:27 said...
အဆင်ပြေတယ် ကြားလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ဘလက်ရေ...
ဆံပင်က နောက်တပတ်၊ နှစ်ပတ်လောက်နေရင်တော့ ပြန်အသားကျသွားမှာပါ...
သိပ်လဲ စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ ...
မဒမ်ကိုး on 15 November 2011 at 13:34 said...
း( မနက်ကမန့်ထားတာ ဘယ်ရောက်သွားပီလဲ မသိ ..
မိုးငွေ့...... on 15 November 2011 at 13:37 said...
စိတ်ကြီးရင် ထိတ်တီးလိုက်မယ်း)
jasmine(တောင်ကြီး) on 15 November 2011 at 20:57 said...
ချစ်ချစ် ခင်ခင် ကက်စမင်း
ရတနာခင်နဲ့ ..ဘင်လာဒင်နဲ့တော့ တွေ့ နေပီပေါ့.....
အိမ်း...သမီးရည်းစားတွေဆိုပေမယ့်လည်း သက်တန်းရှည်နေကြသူတွေမဟုတ်လား ပစ်ပစ်ရေ...ပစ်ပစ်ရဲ့ ချစ်ချစ်ကိုလည်း နားလည်မှုလေး ပေးလိုက်ဦးပေါ့...သူ့မှာလည်း သူ့အခက်အခဲရှိဦးမှာပါပဲ...ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်တဲ့ဘ၀တွေကို ငါ့ညီမ တစ်နေ့တော့ နားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့...စိတ်လည်း နည်းနည်းလျှော့ပါကွယ်...ယောက်ျားတွေမှာ ပစ်ပစ်တို့ သတိမထားမိတတ်တဲ့ မာနတရားဆိုတာလည်း ရှိသေးသကွဲ့...တစ်ခါတစ်ခါကျရင်လည်း ကိုယ်က ချစ်လို့ဆိုးတာနွဲ့တာ အနိုင်ကျင့်တာကလည်း သူ့မာနကို မထိခိုက်မိစေဖို့ သတိထားပေါ့ကွယ်...ကိုယ်က ချစ်လို့ စိတ်ကောက်တာ၊ စိတ်ဆိုးတာဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်သားမှာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်သွားရင်လည်း ဘယ်မှာချစ်ရာရောက်ပါတော့မလဲ...
တစ်သက်မခွဲရွှေလက်တွဲကြမယ့် သမီးရည်းစားတွေဆိုရင်တော့ အခုကတည်းက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ထားကြတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ငါ့ညီမရေ...စိတ်ဆိုးတယ် စိတ်ကောက်ကြတယ်၊ သ၀န်တိုကြတယ်ဆိုတာ သမီးရည်းစားဘ၀မှာသာ ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပေမယ့် အကျင့်ကြီးပါသွားရင် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ မသာယာတော့ဘူးဗျား...
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု နွေးထွေးညင်သာမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ...
...အလင်းစက်များ on 15 November 2011 at 23:08 said...
ဖျားဖျား ပစ်ပစ်တို့ များ စိတ်ကြိးထှာကွယ်။ အမေရိကန်လို ချဲပစ်လိုက်တယ် ဆိုပါရောလား။ဟဟဟဟ
နောက်ဆုံးတော့ အမေရိကန်လည်း ပြည်ကြီးသူနဲ့တွေ့ တော့မှပဲ ပက်လက် လန် ကျရတော့တာပဲ။
ကျနော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (လက်ရှိထိုင်ဝမ် နိုင်ငံသား ရပြီး) ပြောပြတာ သူပြည်မကြီး သွားလည်တုန်းက ဆို အတော်လေးကို လန့် ဖြန့် သွားဖူးတယ်တဲ့။ မောလ် တစ်ခုမှာ တရုတ်မကြီးတစ်ယောက်နဲ့တရုတ် အငယ်မလေး တစ်ယောက် အော်ကြ ဟစ်ကြတာ လူကြားမကောင်းဘူးဆိုပဲ။
ပြည်မကြီးက ကိုယ့်ပြည်သူ ကို စောင့်ရှောက်သေးတယ် ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူးလေ။ နော။ ကိုယ့်ဆီသာ။ :D
ညိမ်းနိုင် on 15 November 2011 at 23:23 said...
ရန်ဖြစ်ပြီး ပြန်ချစ်သပေါ့လေ...ဟုတ်လား..ပစ်ပစ်ရဲ့...၊တာလီဘန် နဲ့အမေကြီး
ကန်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရတယ်ပြန်သကိုး..၊ကိုယ်တွေမှာ ဘယ်တော့
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) on 16 November 2011 at 00:43 said...
ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့လေ.. အစကတော့ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ အမေရိကန်လို လုပ်မလေး ဘာလေးနဲ့ နောက်တော့လည်း ပျော့သွားတာဘဲ.. အဟုတ်မှတ်လို့း) သူတို့မလဲ ဖုန်းအနား တစ်ချိန်လုံးဘယ်ထိုင်စောင့်နိုင်မတုန်း.. လူကြီးက တစ်ခုခု ခိုင်းစရာရှိလို့ခေါ်ရင် ချက်ခြင်း သွားရတာလေ.. အလုပ်ကိစ္စ ပေါ်လာရင်လည်း ဆင်ခြေပေးလို့မရ. ချက်ခြင်းသွားရတာ.. နည်းနည်းတော့ နားလည်ပေးလိုက်ပါ ညီမရေ.. ပြောစရာမလိုပါဘူးလေ..ပစ်ပစ်က နားလည်ပြီးသားပါ... ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်းလည်း ပြန်ပြီး အချစ်တိုးကြပါစေ.. နော
ဘုန်းဘုန်းတောက် on 16 November 2011 at 01:28 said...
ပစ်ပစ်ရေ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲလား။ ဆရာဟန်ကြည် ပေးတဲ့ခမန့်က တကယ်တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ အရာရာကို ပညာ၊ သတိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်ပေါ့ကွယ်။
ရန်ဖြစ်ပီး ပြန်ချစ် ပေါ့ :D
မ .ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်သလိုလို ရှိနေတယ် ဟုတ်..
စ တာနော် ချစ်လို့မွန်ကတော့ပြုံးပြုံး ကြီးဖတ်သွားတယ်
မ..ရေးထားတာဖတ်ရတာ ရုပ်ရှင် ကြည့်နေရသလိုပဲ ..
mstint on 17 November 2011 at 11:38 said...
ဒေါသလေးတွေ ဖွင့်အံလိုက်ရလို့ သက်တောင့်သက်သာ ရှိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ် ပစ်ပစ်ရေ။ ဒေါသဆိုတာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတာမို့ တာရှည်ဖက်တွယ်မထားသင့်ဘူးနော်။